» वित्तीय विवरणमा कामना सेवा विकास बैंकको उत्साजनक प्रगति, ७० करोड मुनाफा, १६% लाभांश दिन सक्षम
०१ कार्तिक २०७८
वित्तीय विवरणमा कामना सेवा विकास बैंकको उत्साजनक प्रगति, ७० करोड मुनाफा, १६% लाभांश दिन सक्षम
३ श्रावण २०७८, आईतवार ०८:००
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने पहिलो वित्तीय संस्था बनेको छ । सो संस्था आर्थिक वर्ष सकिएको तीनदिन भित्रैमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष वर्ष २०७७।०७८ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले ७० करोड दुई लाख ४० हजार ४०१ रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ६ गुणा बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले जम्मा ११ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँ यस्तो नाफा आर्जन गरेकोमा य वर्ष उल्लेख्य बृद्धि भएको हो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २९.९२ प्रतिशत बढेको छ भने खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी २२.८३ प्रतिशत बढेको छ । बैंको इम्पेरमेन्ट चार्ज ५५.८७ प्रतिशत घटेको छ । जसले गर्दा सञ्चालन मुनाफा ३३४.२२ प्रतिशत बृद्धि हुँदा कामना सेवा बैंकले चमत्कारिक प्रगति गर्न सफल भएको हो ।
गत वर्ष कोरोना महामारीका प्रभावमा बैंकको मुनाफा खुम्चिएकोमा गत आवमा बैंकले कोरोना महामारीकै बीचमा चमत्कारिक सुधार गर्दै शेयरधनीहरुलाई मनग्य लाभांश दिन समेत सक्षम बनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा गत आर्थिक वर्षमा ४३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । कूल चुक्ता पुँजि दुई अर्ब ६५ करोड १९ लाख ६३ हजार ७३२ रुपैयाँ चुक्ता पुँजि भएको बैंकले सो मुनाफाबाट १६.३८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्षम हुने देखिएको छ ।
नाफा बृद्धिसँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि २ रुपैयाँ १६ पैसाबाट बढेर २६ रुपैयाँ ४० पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी, प्रतिशेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ ४८ पैसाबाट बढेर १४८ रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको छ । समीक्षा अवधीमा बैंकको निक्षेप ३९.३२ प्रतिशत र कर्जा ४९.७७ प्रतिशत बृद्धि हुँदा व्यवसाय समेत विस्तार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको एकैदिन तीन नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा
नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा बचत खाता खोलेका दिनेश श्रेष्ठका परिवारले पाए बीमा दाबी भुक्तानी
ब्याजदरबारे भटाभट निर्णय गर्दै बैंकहरु, सानिमा बैंकको घट्दा धेरैको बढ्यो, कुनले कति बढायो, घटायो ?
बैंकर्स संघको बैठक सम्पन्न, सिंगल डिजिटमा ब्याजदर कायम गर्ने भद्र सहमती
आइसिएफसी फाइनान्सद्धारा लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
यी हुन आजका सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी, नविल बैंक पहिलो नम्वरमा
नेप्से १७ अंकले बढ्यो, म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै उपसूचकमा छायो हरीयाली
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स एसियाको उत्कृष्ट रोजगारदाता ब्राण्ड अवार्डबाट सम्मानित
हुवासिन सिमेन्टलाई २० मेगावाट विद्युत दिइने, स्वीचिङ स्टेसन सञ्चालनमा
यस्तो छ दशैंपछिको पहिलो दिनको कारोबार, नबिल बैंकमा सबैको आकर्षण
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा नितिश गुप्ता नियुक्त